Nezvedu | almancax
musha » About Us
I www.almancax.co, 2006 makore muTurkey nhasi kubva mutauro wokuGermany, uye German Visa, Work Permit chechikamu uye vave zvinogadzirisa mabasa pamusoro anotarisana vokuTurkey muGermany.
germanx ine zviuru zvemapepanhau emapepa mumapoka akasiyana uye zvinyorwa zvakasiyana-siyana zvinenge zvese mazinga ese anoshandisa.
Pa almanx, uchawana ruzivo rwaunoda kuti udzidze mitauro yekunze.
almancax, uyewo wakafara zviri forum, zvose zvamarudzi kuti kushanda vadzidzi chiGerman mutauro mitambo, dandemutande uye pafoni mafomu, mharidzo zvakanyorwa, mavhidhiyo mharidzo, zviitwa, rine zvinyorwa zvakasiyana-siyana uye zvakadai ezviuru neizvozvi.
pamwe almancax; Unogona kutanga kubva muvare kudzidza German, unogona kuva yako huripo ruzivo, rokuchikoro uye kuwana anodiwa mashoko yokutsvakurudza wako, German, dzaungadzidzire, unogona kudzidza kuti utange pamusoro German uye Germany, vanogona kugadzirisa miedzo German anogona mitambo, unogona tauriranai. Nokupeta vanosvika mhando dzose mashoko wamuri kutsvaka German, apo unogona kuvandudza pachako.
Mukuwedzera, iwe unogona kuwana ruzivo pamusoro peGermany mu forum yedu, unogona kuwana ruzivo pamusoro pezvedzidzo, mabhizimisi, tenzi, tenzi, chikwata chechiremba muGermany, unogona kugadzirira miedzo yakadai seA1, A2 uye unogonawo kuwana ruzivo kubva kune shamwari dzapinda uye dzakakunda miedzo iyi. mapasipoti avo achida kuenda, vhiza nzira, mhuri reunification kushandiswa, vachitora purogiramu, mvumo basa muGermany, uchishandisa rezinesi kubva Turkey, tourist vhiza kwacho kunogona kutora mashoko ari chaizvo panyaya kuenda somudzidzi muGermany uye nekusangana yararlanabilirsiniz.y kuti iwe unogona kugovera ruzivo rwako panyaya idzi, unogona kupa ruzivo rwakakosha kune vatangatanga.
Information, dzidzo, kukurukurirana, kupanana, basa, kuremekedza, tsvakurudzo, pamwe chakaunza pamwe chikuva kuti anogona kusvika mhando dzose mashoko!
Yakanyorwa uye yakataura zvidzidzo zveGermany,
Mutauro weGerman wokutaura,
Nhetembo dzeGermany, nhau, zvirevo, nheyo,
Mibvunzo yakasiyana uye mhinduro pamusoro pemitauro,
Duramazwi reIndaneti uye rinobatsira rinotaura,
uye kune zvakawanda zvakasiyana-siyana zvemashoko ekunyorwa pano.
Kuti udzidze zvakawanda, unofanira kuongorora zvimwe zvikamu zveGerman forum.
Ndinokutendai nokuti munofunga.